“Nantoni na oyifunayo, yitsho nje, ndiya kuyenza.” Ubungasoze uthethe kanje kumntu njee okanye kumntu ongamaziyo. Kodwa ke, ukuba ibingumhlobo wokwenene ubungayi kuba nangxaki. Kuqhelekile ukuba abahlobo bokwenene benzelane izinto.
IBhayibhile ibonisa ukuba uYehova ubenzela izinto ezibonwabisayo abakhonzi bakhe. Ngokomzekelo, uKumkani uDavide, owayenobuhlobo kunye noThixo wathi: “Zininzi izinto ozenzileyo, Owu Yehova Thixo wam, kwanemisebenzi yakho emangalisayo neengcamango zakho kuthi. . . . Zininzi kakhulu kunokuba ndinokubalisa!” (INdumiso 40:5) Ngaphezu koko, uYehova ubenzela izinto ezibonwabisayo nkqu nabo bangekamazi, ‘ngokuzalisa iintliziyo zabo ngokutya nangokuchwayita.’—IZenzo 14:17.
Siyakuvuyela ukubenzela izinto abo sibathandayo nesibahlonelayo
Ngenxa yokuba evuya uYehova xa esenzela abanye izinto ezintle, isengqiqweni into yokuba alindele ukuba ‘bayenze ibe nemihlali intliziyo yakhe’ abo bafuna ukuba ngabahlobo bakhe. (IMizekeliso 27:11) Kodwa yintoni onokuyenza ukuze ukholise uThixo? IBhayibhile iphendula isithi: “Musani ukulibala ukwenza okulungileyo nokwabelana ngezinto nabanye, kuba uThixo uyakholiswa yimibingelelo enjalo.” (Hebhere 13:16) Ngaba le nto ithetha ukuba ukwenza okulungileyo nokwabelana nabanye ngezinto kuko kuphela okufunekayo ukuze sikholise uYehova?
IBhayibhile ithi: “Ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukumkholisa kakuhle uThixo.” (Hebhere 11:6) Emva kokuba ‘uAbraham ekholiwe kuYehova, wabizwa ngokuba ngumhlobo kaYehova.’ (Yakobi 2:23) Naye uYesu Kristu wenza kwacaca ukuba kubalulekile ‘ukubonisa ukholo kuThixo’ ukuze sifumane iintsikelelo zikaThixo. (Yohane 14:1) Ngoko, unokulubonisa njani ukholo olufunwa nguThixo kwabo abatsalela kuye? Unokuqala ngokulifunda rhoqo iLizwi likaThixo, iBhayibhile. Ngokwenza oko, uya kuba ‘nolwazi oluchanileyo lokuthanda kwakhe’ uze ngaloo ndlela ‘umkholise ngokupheleleyo.’ Njengoko usiba nolwazi oluchanileyo ngoYehova yaye ulusebenzisa, uya kuba nokholo kuye yaye yena uya kusondela kuwe.—Kolose 1:9, 10.
Izinto ezintathu ezinokukusondeza kuThixo.
Funda indlela uThixo aqiniseka ngayo ukuba bonke abantu abaneentliziyo ezinyanisekileyo bayafunda ngaye.